China iron oxide red 110/120/130/180/190 abakhiqizi nabaphakeli | I-Shencai Pigment
1. Emkhakheni wezinto zokwakha, isetshenziswa kakhulu kukasimende omibalabala, ithayela likasimende likasimende, ithayela likasimende likasimende, ithayela elilingisiwe elicwebezelisiwe, ithayela likakhonkolo, udaka lombala, i-asphalt yombala, i-terrazzo, i-mosaic tile, imabula yokufakelwa nodonga STUCCO, njll. 2. Isetshenziselwa ukufaka imibala nokuvikela izinto zokumbozwa okuhlukahlukene, kufaka phakathi ingaphakathi elisuselwa emanzini ne-Ingaphandle Wall ezinengilazi, ukumbozwa ngempuphu, njll. Futhi ifanele ama-primers asuselwa kuwoyela namabhantshi aphezulu afaka i-epoxy, i-alkyd, i-Amino, njll. Kungasetshenziswa nopende wamathoyizi, upende wokuhlobisa, upende wefenisha, upende we-electrophoretic kanye no-Enamel. I-Iron Red Primer iyindlela engamelana nokugqwala kupende obomvu obizayo, okonga insimbi engeyona eyensimbi. 3. Okokufaka imibala kwemikhiqizo yepulasitiki, efana ne-thermosetting polymer ne-Thermoplastic, nemikhiqizo enjoloba, njenge-tube yangaphakathi yemoto, ishubhu langaphakathi lendiza, ithubhu langaphakathi lebhayisikili, njll. I-4, yezinto zokugaya ezisezingeni eliphakeme, ezisetshenziselwa imishini ye-hardware enembile, ukupholisha ingilazi ebonakalayo. Ubumsulwa obuphezulu be-Powder metallurgy yiyona nto eyisisekelo yokukhiqiza ama-alloys ahlukahlukene kazibuthe namanye ama-steels ebanga eliphakeme. Yenziwe nge-iron (2+) sulfate (i-anhydrous) noma i-iron oxide ephuzi noma i-base iron ngokubalwa kwezinga lokushisa okuphezulu noma ngqo kusuka endaweni enamanzi.
Igama Lokuhweba INSIMBI OXIDE Bomvu
Inkomba yombala I-pigment red 101 (77491)
I-CAS No./EC Cha 1309-37-1 / 215-168-2
Imininingwane Okuqukethwe (Fe2O3) % ≥95
inani le-pH 5 ~ 7
Amandla adonsela phansi athile g / cm3 5.0
Olandelayo: iron oxide ophuzi 311/313/920